Raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ny Raiki-pitia amin'ny lehilahy - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ny Raiki-pitia amin'ny lehilahy
Izy dia mahazo ny fisaraham-panambadiana ary tena te-ho
Raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady, ary efa mipetraka ny fanontaniana: ahoana no Fomba Lehibe izany dia hoIzany dia ny raharaha, ny fahitana dia ataovy na ny fiainana mba ho Tantara an-tsehatra na fiafarana. Fa ny fanontaniana voalohany dia: Tokony handray izany fifandraisana amin'ny rehetra. Mazava ho azy dia afaka hitranga, afa-tsy raha toa ny iray amin'ireo efa misy ny fanambadiana sy fotsy.
Raha fantatrao fa ny lehilahy no manambady, manana fahafahana hafa ao amin'ny fanombanana ny Loza mitatao.
Fa mora kokoa izany dia tsy.
Tsy tambo isaina ny fanambadiana eto an-tany nanomboka rehefa ny iray na samy mpiara-miasa dia nivady. Ary koa, maro ny fifandraisana efa nisy nandritra ny taona maro tao amin'ny atonton-kintan'i ny lehilahy manambady sy ny tompovavy. Ny vehivavy sasany dia niaina nandritra ny taona maro tao amin'ny fanantenana fa izy dia hanao ny fampanantenana ho tonga ny tena sy ny hafa fivoahana fa izy mihitsy no nanao izany. Angamba izy nanana na oviana na oviana. Misy Bigamist, ary misy ara-panahy Bigamist. Ny tena fanontaniana dia tsy Inona manantena aho fa avy ny lehilahy manambady, nefa aho fa izy dia nanambady. Ho an'ny vehivavy sasany manambady ny olona dia hentitra eny-fetra.
Izany dia mendrika ny toe-tsaina.
Matetika dia afaka mampihatra azy ireo mihitsy aza. Na izany aza, amin'ny toe-javatra sasany, tsy mahalala ny olona tsara sy ny firindrana dia tsy dia lehibe fa isan-karazany ianao afaka mitandrina. Indraindray izy dia nanambady ny ratsy ramatoa sy mamely betsaka taty aoriana, ho an'ireo izay miseho rehefa namorona. Ny constellations ny fifandraisana dia toy ny isan-karazany ary samihafa toy ny fiainana ny tenany. Ny vehivavy tsirairay dia tsy maintsy, Willy-nilly, manapa-kevitra ny fomba te-hitondra tena. Tsy maintsy manontany ny tenanao, ny elanelan'ny ianao ity lehilahy tonga miaraka ho toy izany ary raha te-mety ho kivy tia. Ianao dia tsy maintsy mangataka na ny fanambadiana amin'ny hafa, raha ny marina toy ny ratsy araka ny miseho, fa ny ary na izany na tsy izany dia avela ho tafiditra any amin'ny misy ny fanambadiana. Farany, ianao no te-tsy iray ihany ny fiainana. Ny fitondran-tena fanontaniana dia tsy isalasalana fa zava-dehibe. Indrindra fa raha ny ankizy ao amin'ny lalao. Isika dia azo antoka fa manana andraikitra noho ny zavatra ataontsika. Saingy isika koa dia manana andraikitra ho an'ny fahasambarantsika. Fa ny olona tsy mahatoky ary ao amin ny fanahy matetika rogue, mahalala ny vehivavy rehetra. Ny dia fantatra fa Ny lehilahy matetika no tsy ara-tsaina lasa rogue, fa tena izy ihany koa. Na raha toa ianao maso ny soratra amin'ny rehetra ny fiovana, ny iray dia mety tsy fantatsika hoe aiza amin'ny tantara faran'ny. Raha toa ianao-pitia amin'ny lehilahy manambady, manana Olana. Izany dia ilaina mba hijery izany, raha manana mpanampy aretina sy ny lazaina fa tsy Tian'ny olona avy ny tokony fiainana velona ny helo te-hanampy. Ny iray dia tsy maintsy mangataka, na ny vady dia mety ho kokoa angamba congenial, ary dia manolotra ny tena samy hafa ny fisaraham-Panambadiana. Tsy maintsy manontany tena hoe, inona moa ny. Fihetseham-po dia zavatra sarotra mandroboka ianao ho toe-javatra izay te fa tsy Hifoha. Ny zava-drehetra na iza na iza, amin'ny foto-pisainana, eritreritra momba ny olona manambady, rehefa any amin'ny fitiavana. Ny fomba fanao zavatra hafa.
Be dia be ny olona avy amin'ny indray mandra taty aoriana
Na dia niadian-kevitra tany am-piandohana ny fifandraisana, ny fanambadiana ny olona, na mangina ny, fotsiny no samihafa. Ela na ho haingana, fa izy io dia foto-kevitra amin'ny kely indrindra amin'ny olona iray ny fanahy. Raha izy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany dia afa-tsy ny vadiny, ary avy eo vao ny Malala, ny fankalazana, ny, Eny, mbola azo ekena. Fa amin'ny Krismasy, fankalazana ny taombaovao sy nandritra ny fialan-tsasatra, irery, mamely mafy kokoa. Indrindra fa raha izany no taona maro toy izany koa, misy ny manontany hoe nahoana no ny iray amin'ny fiainantsika.
Ny Zava-misy antso ho fanalam-baraka sy ny alahelo.
Ny malalako foana dia tonga eo amin'ny toerana faharoa, sy ny zavatra rehetra ny faharetana, tsy tsara ho azy. Ny lehilahy matetika no ady-fandraharahana sy ny misalasala ny hamela ny taloha fifandraisana.
Dia manantena ny vehivavy iray nijoro nandritra ny taona maro toy ny malalako, dia hitandrina anao fampanantenana sy manantena ny vahoaka ny mahazo izay tianao ambara.
Ny olana ny Malala mba ho ny taolana ny fifandirana, ary rehefa tapitra ilay hira dia mamela anao. Fa misy ihany koa ny hafa Miovaova toy ny tantara. Ny vehivavy sasany dia tena afa-po amin'ny tompovavy fa tsy ny vadiny. Afaka mahazo maimaim-poana ny fiainana sy mahafantatra isika tia ihany. Maro ny fifandraisana toy izany mety haharitra taona na, raha tsy misy ny vadiny mandao ny vadiny. Ary izany na dia eo aza ny zava-misy fa isaky ny roa tanteraka tapaka. Ny vadiny angamba mahalala efa avy ny mpifaninana, fa izy dia nangina koa ho toy ny Fandaharana. Amin'ny farany, ny rehetra dia afa-baraka, na dia efa tonga teny manoloana ny toe-Draharaha. Ny tsirairay ny ara-tsaina ny Filan-kevitra dia tsy manoloana io olana io. Ny sisa dia iray ihany andraikitra, ny zavatra iray mahatonga ny fiainana. Angamba isan-tsegondra vehivavy indray mandeha dia tompovavy ny lehilahy manambady, dia te-hanao izany helo mandrakizay indray. Cupid ny zana-tsipìka ny very, nefa mbola mitohy ho lehilahy manambady. Ny vehivavy rehetra mieritreritra fa tsy afaka hitranga. Mandra-nitranga izany. Inona ny torohevitra tianao homena azy. Izany no fanontaniana mila manontany tena isika amin'ny toe-javatra rehetra momba ny fiainana: Ho sahy hanao zavatra na aho tsy naka na inona na inona vintana. Tsy naka loza, dia tsy afaka ny zava-nitranga, rehefa afaka roa taona, ny fisaraham-panambadiana ary na dia toy ny Ny vadiny eo anilany mifoha. Fa tsy afaka manao ny mifanohitra amin'izany. Ny fiainana dia feno loza sy ny na inona na inona no sasany, afa-tsy ny fahafatesana. Avy amin'ny fomba fijery ny vady ny firaketana an-tsoratra mamelabelatra-pitia amin'ny lehilahy manambady avy amin'ny fomba fijery hafa tanteraka. Matetika, izy ireo mahalala na inona na inona ny ny mpifaninana, mandra-kisendrasendra manala rakotra ny tantara. Koa, izy ireo dia nino, tsy afaka hitranga, na dia mety ho toy ny mpifaninana, ary angamba eo ambanin'ny toe-javatra tsy mitovy, fa voalohany indrindra, tsy maintsy manao ny fahasambarana, Ny Olana ara-pihetseham-po matetika ny raharaha amin'ny vehivavy ny tahotra. Ny olona indulges ao amin'ny fahafinaretana ny fanitsakitsaham-bady sy ny Olana matetika mipetraka ihany, raha ny tompovavy filazana, na velona fahafaham-baraka.
Mamitaka rehefa tapitra ny telo, ary raha ny ankizy no ao an-lalao, ihany koa.
Nahoana ny olona sasany amin'ny fifandraisana sambatra, ary ny olon-kafa. Ao amin'ny maimaim-poana ny E-Mail Coaching, dia mamaly ireo sy fanontaniana hafa manodidina ny lohahevitra Fiaraha-miasa sy ny fifandraisana. Te-ho faly Ianao.
E bishitá i hende di
Chatroulette maimaim-poana firaisana ara-nofo mivantana Mampiaraka amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday tsy misy fisoratana anarana olom-pantatra ny lehilahy video olom-pantatra eny an-dalambe video hihaona ho an'ny firaisana ara-nofo video Fiarahana tamin'ny tovovavy chat tsy misy fisoratana anarana video Fiarahana tamin'ny tovovavy iray maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat velona ny Fiarahana